Jurden Klopp oo u jawaab celiyay Tageere Manchester United ah kaddib markii uu…. – Gool FM
(Liverpool) 21 Feb 2020. Hoggaamiyaha kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jurden Klopp ayaa warqad jawaab celin ah u diray 10 jir taagero buuxda u ah kooxda Manchester United.
Da’yarkan kooxda Manchester United taageera ayaa ka codsaday macallinka reer Germany in ay qasaaro la kulanto Liverpool, taas oo ku socota xagaagan dar dar aad u xoogan.
Inkastoo Liverpool ay guul daro 1-0 kala kulantay Atletico Madrid lugta koowad ee wareega 16-ka Champions Leagea habeenkii Talaadada, ayaa hadane Reds waxa ay tahay koox guuleysatay 17-kii kullan ee ugu dambeysay horyaalka Premier League.
Hadaba, Daragh Curley oo ah taageeraha kooxda kubadda cagt Manchester United ayaa sida tan u qoray Klopp.
“Liverpool waxa ay guuleystay kullamo badan, waxaad badin doontaa sagaal kulan oo dheeri ah kaddib waxaad heysataa rikoorka ugu fiican ee aan laga badinin kubadda cagta Ingariiska, Ka taagere Man United-na murug ayeey ii tahay”.
“Marka waqtiga kale oo ay Liverpool ciyaareyso, Fadlan ha guul dareystaan, u oggolow kooxaha kale in ay goolal dhaliyaan, waxaan rajeynaa in aan kugu qanciyay in kullan ka tirsan horyaalka ama tartamada kale mar danbe aydan dib u guuleysan”.
Macallinka reer Germany ayaa go’aansaday in uu u jawaabo taageerahan, isagoo hadalkiisa sii raaciyay in kooxdiisa uu u oggolan doonin in ay qasaaro la kulanto.
“Nasiib daro, ma fullin karo codsigaaga, si naba uma dooran karo”.
“Sida ugu badan ee aad u dooneyso in Liverpool ay qasaaro la kulanto, shaqadeyda waa in aan wax walba u sameeyaa, in aan ka caawiyaa Liverpool in ay guuleysato, sida ay rabaan in ay dhacdo Malaayin taagerayaal ah oo adduunka ku nool, marka uma oggolan karo hoos”.
“Si badbaado leh ayaan u dhihi karaa in halka shay oo aan beddeli doonin ay tahay hamigaaga aad u qabto kubadda cagta iyo kooxdaada. Manchester United waxay nasiib ku leedahay in ay adiga ku heysato”.
Si kastaba ha noqotee, Aabaha iyo Hooyada wiilkan yar ayaa la yaabay sida wiilkoodu uu warqada ugu diray Klopp, nasiib wanaagse uu u helay jawaab sida BBC-da ay u sheegeen.